Akụkọ - Otu esi eme ka ndị ahịa mara broshuọ vidiyo n'ụzọ niile gburugburu ederede dị nkenke?
Video broshuọ (dee: na usoro nke ngwaahịa ụkpụrụ, makwaara dị ka electronic broshuọ); broshuọ vidiyo bụ ngwaahịa ọhụrụ yana nchikota nke broshuọ ọdịnala na ọkpụkpọ vidiyo vidiyo MP4. Nke ahụ bụ itinye ihe ọkpụkpọ LCD vidiyo na broshuọ ọdịnala; ya mere broshuọ vidio abụghị naanị ọrụ nke broshuọ ọdịnala, kamakwa ọrụ nke ịkpọ foto ma ọ bụ vidiyo.
Ikanam size dị ugbu a: 1.5 ", 1.8", 2.4 ", 2.8", 3.5 ", 4.3", 5 ", 7", wdg
* Ọkà okwu
* Reed mgba ọkụ
* Wuru na-FLASH
* Wuru na-Lithium batrị
* USB ngbanye nnyefe
Akwụkwọ broshuọ nwere isi ihe ndị a:
1. A na-ahazi mkpuchi nke broshuọ ahụ site n'aka ndị ahịa.
2. Vidiyo dị n'ime nwere ike dochie anya onye ahịa na-enweghị onwe ya.
3. N'ihi na o nwere ọrụ nchekwa nke USB flash drive, ya mere ndị mmadụ ga-adịkwu njikere idobe ya na ọ bara uru karị.
1. Ọnọdụ nke ọrụ:
Akpaka mgba ọkụ (enweghị mkpọchi na broshuọ)
Ọ ga-egwu na akpaghị aka mgbe ị gbanyere broshuọ ma mechie mgbe ị mechiri ya.
I nwekwara ike ịgbakwunye bọtịnụ ọrụ dịka ihe ị chọrọ, dị ka: egwuregwu, nkwụsị, kwụsịtụ, olu, wdg.
2. ofzọ odori:
Standard USB akara jikọọ na kọmputa
3. Video nnọchi:
Nwere ike ijikọ broshuọ vidiyo na kọmputa site na eriri USB, chọta diski na-ewepu wee nwee ike ịgbanwe, hichapụ ma ọ bụ bulite vidiyo ọ bụla na broshuọ vidiyo nke nwere ike ime otu ihe ahụ dịka USB nkịtị.
Ojiji na ahia
Dị ka nhazi ọkwa nke broshuọ ahụ si dị, a na-ejikarị ya eme ihe n'oge ndị a:
Ọmụmaatụ, Motherbọchị ndị nne, Christmasbọchị ekeresimesi, ụbọchị ,po, ụbọchị ọmụmụ, wdg. Nlekọta mara mma na ngọzi na-ekpo ọkụ na vidiyo na-egosi mmetụta a na-agaghị echefu echefu.
Dịka ọmụmaatụ, mkpọpụta ụgbọ ala na ngwaahịa, nkwalite ahịa, nkwalite ụlọ ọgwụ, nkwalite ụlọ nkwari akụ, wdg, broshuọ vidiyo ga-achịkwa ahịa kaadị vidiyo. Mgbe ị nyere ndị ahịa gị broshuọ ọhụụ na ihe okike, ọ ga-aba uru karịa ozugbo ị mepere ya ọ na-egwu vidiyo ma ọ bụ vidiyo nke ụlọ ọrụ iji nye gị ezigbo obi ụtọ.
Ọmụmaatụ, ụbọchị ọmụmụ oriri na ọ invitationụ invitationụ, akwụkwọ ịkpọ oku agbamakwụkwọ, wdg.
Iji maa atụ, ncheta, ncheta ngụsị akwụkwọ, wdg, ọ nwere ike weghachite ọnọdụ ahụ n'oge ahụ ma nwee uru ncheta gbasara nchịkọta ahụ. Broshuọ vidio ga-abanye n'ime ndụ anyị na ọnọdụ pụrụ iche ma baa ọgaranya!